Monday January 26, 2015 - 09:25:57 in Wararka by Super Admin
magaalada alqaahira ayaa lagu dilay sedax booliska katirsandeegaanka aljiizah oo kaabiga ku haya Al-qaahira ayay ciidanka booliska ee sida melleteriga utababaran waxay ku toogteen dad kabadan 8 qof oo ubadan dadkii iskusoo baxyada dhigayay.
Ciidamada booliska ayaa isku dayay in ay xoog ku kala eryaan dadka dibad baxyada dhigayay kuwaasi oo udbaal degayay 4 sana guuradii kasoo wareegtay kacdoonkii Masar ee Mubaarak lagu riday.
Dadka ayaa ka carooday go’aankii maalmo ka hor kasoo baxay maxkamdda sare ee masar oo lagusii daayay Jamaal iyo calaa oo ahaa wiilasha Mubaarak islamarkaana ku lug lahaa xasuuqii shacabka ka dhanka ahaa xiligii kacdoonku bilaawga ahaa.
Cabdi fataax alsiisi hoggaamiyaha melleteriga ayaa aaminsan in wax kacdoon ah uusan ka dhicin Masar taasi bedelkeedna ay ku mashquulsanyihiin taczida Cabdalla Bin Cabdul Caziiz hoggamiyihii hore ee daaquudka sacuudiga ee halaagsamay.
Shacabka Masar ee aan hubeysnayn ayaan iyana ka zuulin in ay taagnaadaan fagaarayaasha iyagoo cod dheer ku oranaya "Inqilaab maya,siisi maya”,warbixinno la uruuriyay ayaa sheegaya in 75% dhalinyarada waxkabarata jaamacadaha iyo iskuulada ay yihiin inqilaab diid ayna taageersanyihiin nidaamkii hore ee Mursi.